Doorashadii Dalka Iyo Deegaanka Oo Si Nabada U Qabsoontay-Caano Kadhan - Cakaara News
Doorashadii Dalka Iyo Deegaanka Oo Si Nabada U Qabsoontay-Caano Kadhan
Jigjiga(CN) doorashadii 5aad ee dalka iyo deegaanka ayaa guud ahaanba si nabad ah u dhacday iyadoo aysan haba yaraatee wax rabshado ah kadhicin meelna islamarkaana ay si xor ah ay shacabku si dhamaystiran codkooda uga qayb qaateen.
Deegaanka Soomaalida ayay doorashadani si gaar ah aad uga duwanayd doorashooyinkii hore waxayna taasi kutusaysaa inaysan haba yaraatee wax nabadiid ah kajirin deegaanka oo laga gudbay mar hore haatana uu shacabku wajahay horumarka oo kaliya.
Doorashadan ayaa waxay aad ugaga duwantahay doorashooyinkii hore marka lafiiriyo deegaanka Soomaalida Itoobiya 1) waa doorashadii koobaad ee deegaanku uu lajaan qaaday doorashooyinka dalka oo hada kahor kaduwanaan jirtay, 2) waa doorashadii koobaad ee ay dumarku helaan inkabadan 30% saamiga musharixiinta xildhibaanimada iyadoo ay hada kahor 2 ilaa 3 ahaan jireen. 3) waxay guud ahaanba dalka uga dhacday si nabadgaliyo ah oo ay shacabku nabadooda iyo xoriyadoodaba ku ilaashadeen, gaar ahaan shacabka deegaanku waxay doorashadani u ahayd mid mooraal kudheehan, 4) waa doorashadii koobaad ee dhacda kadib geeridii Males Zinawi, 5) waa doorashadii koobaad ee hogaaminta sare ee XDSHSI ay markii labaad wakhti(term) dhamaystiran kaga qaybgalaan.
Dhanka kale goob joogayaasha doorashadan shanaad ee dalka ayaa xaqiijiyay inay tahay doorasho si habsami iyo wanaagba u dhacday. Dadka ayaa tilmaamayaa inay tani tahay isbadalka wadanka ka hirgalay ee dhan walba ah iyo bisaylka siyaasadeed ee shacabku ku ilaashanayaan danahooda midnimo iyo nabadgaliyadooda.
Hadaba hadhaagii ubbo ee meelo kamida qurbaha naf lacaaridnimada lajoogay ayaa iskudayay inay rabshadeeyaan fanaaniinta DDSI oo kusugnaa magaalada Stochholm ee wadankaas Sweden waxayna kala kulmeen cashir geesimo ah oo ay faraha kaga gubteen halkaas oo ay waxyeelo culusi ka gaadhay ilaa 7 xubnood oo naf lacaaridiin Ubbo ah.
Shacabka DDSI ayaa aad uga mahadcelinya sida sharafta iyo geesimada leh ee ay cashirka ugu dhigeen naf lacaaridiinta hadhaaga Ubbo. Waxaana goordhaw dhici doona shir loogu mahadcelinayo qurbajoogta DDSI gaar ahaan dhalinyarada cashirkan.
Iskusoo wada duuboo doorashadii 5aad ee dalka iyo deegaanka ayaa u dhacday si aad nabadgaliyo iyo mooraal u leh shacabka, waana doorasho dalka iyo deegaankaba taariikh gooni ah u leh iyadoo aysan dhicin habayaraatee wax dhib ah, balse hadhaagii Ubbo ee deegaanka laga sifeeyay oo hataan ay shaqsiyaad naflacaarid ah ay kugabadaan meelo kamida qurbaha ayaa kufashilmay inay rabshadaan fanaaniintii DDSI ee kusugnaa Sweden waxayna kala kulmeen cashir.